ညီလင်းသစ် Wed Mar 28, 03:23:00 AM GMT+8
အကောင်ပလောင် တွေကတော့ တကယ့်ကို စုံပါပေ့ မချစ်ကြည်အေးရေ..၊ ဆူးတွေနဲ့ အကောင်က Urchin လို့ခေါ်တဲ့ အကောင် များလားလို့..၊ ပင်လယ် ကျောက်တန်းတွေ အကြားမှာ နေတဲ့ အကောင်တွေလေ..၊
ကြယ်တွေကို LCD နဲ့ အစားထိုး ပစ်တဲ့ တရုတ်ရဲ့ အိုင်ဒီယာကတော့ လန်းတယ်၊ မီးတွေ ထိန်ညီးပြီး ခမ်းနားနေလိုက် ကြတာ.၊ ဓါတ်ပုံတွေ ကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင် လိုက်လည်ရသလိုပဲဗျ..၊ ဆက်ရန်ကိုလည်း စောင့်နေတယ်နော်...။
tin min htet Wed Mar 28, 06:49:00 AM GMT+8
အမ ကိုညီလင်းသစ် ပြောတာဟုတ်တယ်။ မြန်မာလို သံပခြုပ် ခေါ်ပါတယ်။ ပင်လယ်ခရု တမျိုးပါပဲ။ ဖြူကောင်က ခြေလေးချောင်း နဲ့လေ :)
May Thu Khine Wed Mar 28, 12:38:00 PM GMT+8
အကောင်တွေများ အသည်းယားစရာပဲ... အယားပြေအောင်တော့ စူးတွေနဲ့ ကောင်တွေကို မချစ်ပြောသလို မစားပါရစေနဲ့ ... :P
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Wed Mar 28, 09:45:00 PM GMT+8
သူတို့မုန့်တွေက စားရတာ အရသာမတွေ့ဘူး ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်နဲ့
မီးတွေအလှဆင်တဲ့နေရာမှာတော့ သူတို့က အတော်လေး တော်တယ်နော်.
အခမ်းအနားတွေမှာလည်း တော်တော်လည်း ပြင်ဆင်တတ်ကြတယ်။
Cameron Thu Mar 29, 12:14:00 AM GMT+8
မကြီးးး အီးးး အသဲယားးတယ်......
Vista Thu Mar 29, 10:16:00 AM GMT+8
ဆူးနဲ့ အကောင်က ဒီတိုင်းမြိုချရတာများလား .. အမငီး
An Asian Tour Operator Thu Mar 29, 02:33:00 PM GMT+8
အကင်အကွမ်တွေ ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သူတွေကို ကျွေးရမယ်။
ချစ်ကြည်အေး Sat Mar 31, 03:57:00 AM GMT+8
ကိုညီလင်းသစ် ဟုတ်တယ် Urchin ဆိုတဲ့ အကောင်ပဲ ရှာကြည့်လိုက်တာ တွေ့ပြီး)))
ကိုတမထ ဖြူကောင်ခြေထောက်မှ မတွေ့ဘူးဘဲ ခုလိုပဲ ဆူးတွေနဲ့ လုံးလုံး လုံးလုံးနဲ့ မြင်ဖူးခဲ့တာကိုး...ဟဟဟားးး
မေသူ အသည်းယားစရာကြီး ဟုတ်တယ်။ အပြင်မှာ ပိုဆိုးသေး...
ချော...ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်နဲ့၊ အစ်မလည်း သူတို့ဟင်းတွေ စားရတာမြိုမကျလှဘူးရယ် ရှောကနဲ ရှောကနဲတောင် မြည်တယ် (ဟမ်)
မိုး အသည်းယားရင် ပြေအောင် သံပခြုတ်လေးကောက်စားလိုက်း)
ဗစ်စ ဆူးတွေ ဖယ်ပြီး စားရတာတဲ့...
ကိုသောမတ်စ် အကင်ကတော့ ဟုတ်ပါပြီ၊ အကွမ်က ဘာတုန်းးးး
(အိပ်မရသောညမှာ အထက်ပါ ကော်မန့်များအား ဘလော့ဂ်ဂါကိုယ်တိုင် ထိုင်ရေးနေခဲ့သည်-၃၁ မတ်လ ၃း၅၆ အေအမ်မ်)
San Htun Mon Apr 02, 11:24:00 AM GMT+8
အီး..အကောင်တွေက စုံပ..ဆက်ရန်စောင့်နေပါသည် မမချစ်..
Yan Mon Apr 02, 10:23:00 PM GMT+8
မြွေနဲ့ ကင်းမြီးကောက်ကို မြင်ရတာ ကျောချမ်းလိုက်တာ. မျိုကျမယ်မထင်ဘူး.
ဒါပေမယ့် လုပ်ထားပုံလေးကတော့ ကောင်းမယ့်ပုံပဲဗျ.း)
**~ မြတ်ကြည်~** Mon Apr 09, 09:03:00 PM GMT+8
ခုမှရောက်တယ် အစ်မချစ်ရေ။ လုံးလည်လိုက်နေလို့။ တရုတ်တွေက အစ်မချစ်ပြောသလို ဝါးလို့ရတဲ့ဟာ အကုန်စားမယ့် သဘောမှာရှိတယ်။ :)